Miaro ahy ve i Apple rehefa mizaha Internet? | Vaovao IPhone
Miaro ahy ve i Apple rehefa mizaha Internet?
Vaovao IPhone | | IPhone Security
Mahatakatra ny fiainana manokana izahay amin'ny fahafahantsika tsirairay mifehy ny mombamomba antsika, ny angona na ny fisie. Ary ny fifehezana azy dia midika hoe afaka manapa-kevitra amin'ny olona izarantsika azy sy amin'iza isika tsy mitovy. Eny, mandra-pahatongan'ny Internet, na dia misy olana aza, ny fiainana manokana dia zavatra azo fehezina kokoa. Fa izao nanjary sarotra ny raharaha. Ary mitranga izany satria rehefa miondrana an-tsambo dia mamela làlana fa tsy ny orinasa ihany no maniry ny hitohy, fa indraindray koa ny olona manana fikasana ratsy kokoa.
Ny fiarovana dia tsy miankina amin'ny karazana solosaina na smartphone anananaoNoho izany, tsy maninona raha manana iPhone, Mac na fitaovana avy amin'ny marika hafa ianao. Isika rehetra dia iharan'ny fanafihana an-tserasera, halatra maha-izy azy, ary karazana olana mifandraika amin'ny fiainana manokana. Ohatra, ny iray mahazatra dia ny fangalarana ny antsipirian'ny banky rehefa mividy amin'ny Internet isika, zavatra iray fahita ankehitriny. Ho an'ity no tsara indrindra maka fepetra izay manampy antsika hiaro ny maha-izy antsika.
Ahoana ny fomba hiarovanao tena amin'ny Internet
Mampiasa VPN. Ampidino ny VPN tsara indrindra (tambajotra tsy miankina virtoaly) ary ampandehano ao anaty browser-nao, indrindra raha mizaha amin'ny tamba-jotra wif ho an'ny daholobe ianao (toy ny tranomboky na cafeteria). Raha mampiasa VPN ianao, ny fivezivezena rehetra vokarinao dia hohafinafina, ary noho izany, ho sarotra kokoa amin'ny olona iray ny miditra amin'ny angon-drakitrao. Fitaovana tena ilaina izy io, ary mendrika ny hametrahana azy io.
Amboary ny volanao Wi-Fi. Ny zavatra tsara indrindra dia ny ampanjifainao ny tamba-jotra Wi-Fi, satria ny data sy ny fikirakirana izay tonga amin'ny toerana misy anao dia tsy azo antoka mihitsy, mety ho mora hita izy io. Ho an'ity aloha, ovao aloha ny tenimiafinao, ovao ny anaran'ny router na azonao atao ny manampy ny adiresy WPA2.
Mampiasà tenimiafina mahery. Indraindray dia toa nofy ratsy ny mamorona teny miafina amin'ny tranokala vaovao, satria mangataka fiasa marobe aminay izy ireo. Eny, tsy hanelingelina anao izany, fa ho fiarovana anao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fananana endri-tsoratra mihoatra ny enina, misy karazana toetra manokana (raha azo atao), sora-baventy sy sora-baventy i. Ary raha azo atao dia mamorona tenimiafina isan-karazany isaky ny tranokala, mba hiarovana ny hafa raha sanatria ka nanafika ny iray.
Avereno jerena ireo teny manokana momba ny tsiambaratelon'ny tambajotra sosialyo. Rehefa mamorona piraofilina vaovao ianao dia te hiteny eny amin'ny zavatra rehetra nefa tsy mamaky ny fepetra. Ny zavatra tsara indrindra dia ny famerenanao ny tsiambaratelo momba ny kaonty media sosialy rehetra. Amin'ny tranga sasany dia azonao atao ny misafidy ny haben'ny fiainana manokana. Raha manapa-kevitra ny hisalasala ianao farafaharatsiny dia satria nanapa-kevitra toy izany ianao. Fa zava-dehibe ny fahalalana ny fiarovana anao. Amin'izay ianao dia afaka manapa-kevitra hoe iza no afaka miditra amin'ny atiny ary iza no tsy afaka. Manoro hevitra anao ihany koa izahay handinika ny politikan'ny tsiambaratelo indraindray, satria indraindray misy ny teny miova.
Diovy ny kaontinao. Azo antoka fa amin'izao fotoana izao dia efa manana mombamomba anao ianao mamorona amin'ny pejin-tranonkala maro sy sehatra maro noho izay eritreretinao. Toy ny ao an-trano ihany, tsara indraindray ny mametraka filaminana sy manadio. Mba hanaovana izany, amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny mailakao dia ho afaka hahatadidy ireo pejy nosoratana anarana ianao, hamafa ireo kaonty izay tsy ampiasainao ary hitazona ireo ilaina. Io no fomba hamafana ny angona anao manokana amin'ireo tranonkala izay tsy tianao hampiasa azy io.
Akatony ireo fivoriana. Tena mahazatra ny fialana amin'ireo tranonkala tsy misy fivoahana. Eny, toa adaladala izy io fa tena ilaina tokoa ny manao azy. Raha tsy mora ho an'ny olon-kafa manana fikasana ratsy ny hahazo ny angon-drakitrao. Ampiharo amin'ny tambajotra sosialyo ihany koa izany.
Aza atao mandefa bebe kokoa ny kaonty. Tsy misy ny fiarovana 100%, raha mampiasa Internet isika dia miharihary hatrany. Noho izany, raha te hiaro tena ianao dia tsara kokoa ny mizara kely ny mombamomba anao. Sarotra izany ankehitriny, fa azonao atao ny manandrana ohatra ny tambajotra sosialy. Ambonin'izay fampahalalana rehetra izay tsy tianao hananan'ny antoko fahatelo. Tandremo tsara izay avoakanao.
Jereo hoe iza no manolotra ny angonao. Ary ambonin'izany rehetra izany, matokia ireo pejin-tranonkala fantatrao na manaja ny RGPD sy ny LOPD, fampahalalana izay ho hitanao mora foana ao amin'ny tranonkalany, raha tsy manana izany izy ireo. Aza manolotra tahirin-kevitra manokana na antsipirian'ny banky amin'ireo pejin-tranonkala izay tsy fantatrao fa tsy azonao atokisana.
Vavahady fandoavam-bola. Indraindray rehefa mividy an-tserasera isika, rehefa mandoa vola, dia tsy maintsy asehontsika amin'ny vavahady fandoavam-bola, izany hoe amin'ny pejy iray izay mangataka fampahalalana ho antsika hanatanterahana ny fifampiraharahana (toy ny kaody karatra na kaody SMS izay ny banky dia manome antsika. baiko). Tena ilaina amin'ny fiarovana antsika io.
Ilaina amin'ny Internet ny fiainana manokana. Ny fitetezana anay dia mamela soritra, indrindra ny fandinihana ny habetsaky ny angona omenay rehefa mamorona kaonty na rehefa mampiasa ny antsipirian'ny bankinay izahay. Noho io antony io, na inona na inona solosaina ampiasaintsika, dia ilaina ny mandray fepetra hiarovana ny tenantsika amin'ny fisehoana ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Miaro ahy ve i Apple rehefa mizaha Internet?
Pegatron dia te-hamindra ny famokarana ho any Vietnam
Gaga! Disney + dia miandrandra ny fandefasana azy any Espana